Ujeedka kulanka Axmed Madoobe, Shariif iyo Xasan | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Ujeedka kulanka Axmed Madoobe, Shariif iyo Xasan
Muqdisho (Dalkaan.com) – Hoggaamiyaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo weli ku sugan magaalada Muqdisho ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay madaxweynayaashii hore ee dalka, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Kulanka oo saacado qaatay ayaa ka dhacay hoyga uu Axmed Madoobe ka dagan yahay caasimadda, waxaana diiradda lagu saaray xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka.
Ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii loo sii dhaqaajin lahaa heshiiska cusub ee lagu gaaray Muqdisho, waxayna Shariif iyo Xasan Axmed Madoobe ka dalbadeen inuu dardar-geliyo doorashada, si waqtiga la qabtay loogu soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka.
Sidoo kale madaxweynayaashii hore ayaa hoggaamiyaha Jubbaland ku boggaadiyey dadaalkiisa iyo doorka uu ku lahaa shirkii lagu soo gabagabeeyey Muqdisho.
Dhinaca kale Axmed Madoobe ayaa maanta kusii jeeda Kismaayo, kadib maalmo uu ku sugnaa caasimada, isaga oo la filayo inuu sii amba qaado doorashada Golaha Shacabka.
Muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa Muqdisho ka socday kulamo siyaasadeed oo u dhexeeyey dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo mucaaradka, kuwaas oo gabi ahaan looga hadlay ka gudubka kala guurka iyo dhammeystirka doorashooyinka dalka.
Xidiga Garoonka iyo Xaqiiqooyinka laga Diiwaangaliyay guud-daradii Manchester United kasoo gaartay...
Gool soo daahay oo Joao Moutinho ka dhaliyay Manchester United ayaa Wolves ka caawiyay inay 1-0 kaga badisay kulan ka tirsan Premier League. Cristiano...
Waa maxay sababta uu garsoorka Somalia fasax u galay December oo...